झण्डै २० वर्ष पत्रकारिता अनुभव सँगालेर संचार मन्त्री भएका को हुन् गोकुल बास्कोटा ? « Media Club Nepal
३ चैत्र २०७४, शनिबार ०९:२०
झण्डै २० वर्ष पत्रकारिता अनुभव सँगालेर संचार मन्त्री भएका को हुन् गोकुल बास्कोटा ?
प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७४, शनिबार ०९:२०
३ चैत । काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संचार राज्यमन्त्रीमा काभ्रेका गोकुल बास्कोटालाई नियुक्त गरेका छन् । काभ्रे २ बाट प्रतिनिधिसभामा अत्याधिक मत ल्याएर बास्कोटा विजयी भएका थिए । काभ्रे एमाले अध्यक्ष, एमाले केन्द्रीय स्कूल विभाग सदस्य भइसकेका बास्कोटा ओलीका विश्वासत्रपात्रसमेत मानिन्छ । खरो र प्रष्ट वक्ता बास्कोटा पहिलोपटक सांसद बनेयता नै भावी मन्त्रीका रुपमा हेरिएका थिए । अरु नेताको जस्तो चर्चा नभए पनि उनी मन्त्री बन्नेमा विश्वस्त थिए ।
राज्यमन्त्री बनाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संचार मन्त्री नबनाउँने उनी निकट स्रोत बताउँछ । यसकारणा उनले संचारमन्त्रीकै हैसियतमा काम गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्काे बैठकमा पनि सहभागिता जनाउँनेछन् ।‘प्रधानमन्त्रीले संचारमन्त्री बनाउनुहुँदैन । बास्कोटाले यो मन्त्रालय चलाउँने पक्कापक्की छ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘सामान्यतः संचारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुने प्रचलन छ । सरकारले बास्कोटालाई नै सरकारको प्रवक्ता नियुक्ति गर्ने सम्भावना धेरै छ ।’
नेता बास्कोटा प्रतिनिधिसभामा दोस्रो बढी मत ल्याएर विजयी हुने नेतासमेत हुन् । माओवादीसँग तालमेल गरेर चुनाव लड्दा उनले कांग्रेसका मधु आचार्यलाई पराजित गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभामा पनि सोही क्षेत्रबाट उठेका बास्कोटा कांग्रेसका कन्चनबादेसँग पराजित भएपछि सांसद बन्न असफल भएका थिए । तर, यसपटक उनी अत्याधिक मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।
एमाले काभ्रेको दुईपटक सचिव भएका बास्कोटापटक एकपटक एमाले जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका छन् । २०४८ सालमा अखिलको जिल्ला अध्यक्ष बनेका बास्कोटा राजनीतिमा सक्रिय नहुन्जेल लामो समय पत्रिकारिता पेशामा आवद्ध थिए । अखिलको अध्यक्ष बन्दासमेत उनी पत्रकारिता पनि सक्रिय थिए ।
झण्डै २० वर्ष पत्रकारिता गर्ने क्रममा बास्कोटाले प्रसिद्ध दृष्टि, छलफल, सम्बोधनसहितका पत्रिकामा नेतृत्व लिएर काम गरे । दृष्टि साप्ताहिका चार वर्ष सम्पादक भएर काम गरेका बास्कोटाले छलफल साप्ताहिकमासमेत काम गरे । सम्बोधन साप्ताहिकमा पनि सम्पादक रहेर काम गरे । पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्यसमेत भएका बास्कोटा प्रेस चौतरीको संस्थापक सदस्य पनि हुन् । दृष्टि छोडेर उनी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा लागेका हुन् । पत्रकारिता छोडेपछि एमालेको जिल्ला सचिव हुँदै उनी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आए ।
उनको स्थायी ठेगाना पहिलेको काभ्रेस्थित पहिलेको नयाँगाउँ वडा नम्बर १ र अहिले मण्डन देउपुर वडा ४ हो । २०२७ सालमा जन्मिएका बास्कोटा खरो विचार राख्ने प्रष्ट वक्ता मानिन्छन् ।
बर्दिया घटनाबारे गृहमन्त्री भन्छन् : ‘आदेश बिना प्रहरीले गोली चलाइयो, कारवाही गर्छाैं’
काठमाडौंको फोहोरमाथि ‘फोहोरी राजनीति’, बन्चरेडाँडामा प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर लगिंदै
बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्षमा भगवान अधिकारी र उपाध्यक्षमा तारा राना विजयी
मण्डनदेउपुर नगरमा भएको चरम भष्ट्राचार रोक्न स्वतन्त्र युवाको मेयरमा उम्मेदवारी
महाधिवेशनलगत्तै देशलाई चुनावमा लाने काङ्ग्रेसको दाउ, के होला सत्ता गठबन्धन ? (हेर्नुहोस्)